Wasiirkii Amniga Jubbaland Iyo Sarkaal Ciidan Oo Maxkamad La Hor Keenay – HCTV
0	October 6, 2019 12:36 pm
Tirada Dhimashada Ka Dhacday Xabsi Ku Yaala Venezuela Oo Korodhay
Afhayeenka Madaxwaynaha Somaliland Oo Is-casilay.
Suudaan: Hablaha Ciyaaraha Kubadda Cagta Oo 30 Sano Ka Dib, Garoomada Ku Soo Laabtay
Muqdisho, (HCTV) – Cabdirashiid Xassan Nuur Janan oo ahaa Wasiirkii Amniga ee maamul goboleedka Jubbaland iyo Nin kale oo magaciisa la yidhaa Aadan Maxamed oo ahaa taliye ciidamo ka howlgali jiray degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa maanta la horkeenay Maxkamada gobolka Banaadir.
Cabdirashiid Xassan Nuur (Janan) ayaa gacanta dowladda Soomaaliya ku jiray tan iyo bishii September, ee la soo dhaafay waxaana lagu eedeynayaa in uu ka geystay gobolka Gedo tacdiyo ka dhan ah Bani’aadannimada sanadkii 2015-ka.
Dacwad ku soo oogista Cabdirashiid Janan ayaa imaneysa xili khilaaf xooggan uu u dhaxeeya Dowladda Federaalka iyo Maamul gobolleedka Jubbaland, waxaana xusid mudan in bishii April ee sanadkan Maxkamadda Gobolka Banaadir baabi’isay dhammaan eedeymihii loo heystay Wasiir Janan.
Dowladda Soomaaliya ayaa qabatay Wasiirka dhamaadkii bishii August ee sanadkan xili uu Transit ku ahaa magaalada Muqdisho, kuna sii jeeday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
Maamul gobolleedka Jubbaland ayaa hore u cambaareeyay xadhiga Wasiirka oo ay ku tilmaameen mid sharci darro ah, iyaga oo dalbaday in sida ugu dhakhsaha badan loo sii daayo.
Eedeymaha loo heysto ayaa waxaa ka mid ah dad lagu dhex dilay Xabsiyo ku yaala gobolka Gedo iyaga oo aan maxkamada la soo taagin iyo waliba tacadiyo kale oo sida la sheegay loogu geystay dad rayid ah amar uu bixiyay Cabdirashiid Janan.
Soomaaliya: Ciidamada Nabad-ilaalinta Ee Jabuuti Oo Dagaal La Galay Ciidammada Dawladda